Pique, Coutinho & Ter Stegen oo maqan sidee ayay u muuqan doontaa shaxda ay ku soo geli doonto Kooxda Barcelona kulanka ay booqanayaan Juventus ee Champions League? – Gool FM
(Turin) 27 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa booqan doonta naadiga Juventus habeen dambe kulan qeyb ka ah tartanka Champions League heerkiisa guruubyada.
Kulankan oo ka dhici doona garoonka Allianz Stadium ayaa ka mid ah kuwa ugu xiisan badan ee sanadkan lagu daawanayo heerka guruubyada ee Koobka Horyaallada Yurub.
Barcelona kulammada waa weyn ayaa ku socon doona kaddib markii ay guuldarro kala soo kulantay Real Madrid kulanka El Clasico, waxa ay haddana u safrayaan Juventus oo kaga hortagi doonaan Turin kulan ku tirsan Guruubka G ee Champions League.
Kooxda haysata horyaalnimada Talyaaniga ayaa doonaysa inay ka aargudato Barcelona taasoo ku garaacday iyaga final-kii tartankan ee sanadkii 2015-kii, waxayna doonayaan inay garaacaan kulankan.
Naadiga reer Spain ayaa kulankan heli doonin adeegga xiddigaheeda sare ee Gerard Pique oo ganaaxan, Philippe Coutinho iyo goolhaye Marc-Andre ter Stegen oo dhaawacan, si la mid ah Samuel Umtiti.
Barcelona ma jiro ciyaaryahan shaki laga galinayo kulankan, marka laga soo tago xiddigahaas aan kor ku soo xusnay oo gabi ahaanba seegaya kulanka ka dhacaya Magaalada Turin.
Haddaba shabadda ciyaaraha ee Sports Mole ayaa sii shaacisay qaabka ay u muuqan doonto shaxda macallin Koeman uu ku soo geli doono kulanka ay kooxdiisa Barcelona wajahayso Juventus ee ka dhacaya Turin:-
"Barcelona waligeed iskuma dayin inay la soo saxiixdaan Paul Pogba" - Lataliyihii hore ee Kooxda Bacelona
"Messi waa kan ugu fiican adduunka waana inaan caawinaa isaga" Xiddig kooxda Barcelona ah